Runtu waa Qanaacada Qofka! - Sheeko | KEYDMEDIA ONLINE
Runtu waa Qanaacada Qofka! - Sheeko
Dr. Axmad Cabdulahi (Keydmedia) - Arday baa soo xaadiray Muxadaradii Maadada Xisabta, wuxuuna fariistay Fasalka meesha udanbaysa, wuuna seexday. Muxadaradii markay dhamaatayna wuxuu kutoosay Buuqii Ardaydii baxaysay, wuxuu fiiriyay Saburadii, wuxuuna arkay Macalinkii inuu kuqoray 2 Su´aalood, si dhakhsa ah buuna ugu Qortay Buugiisii wuuna sii baxay.
Markuu Gurigii tagayna wuxuu kafikiray siduu uga Shaqayn lahaa Labadii Su'aalood, su'aalaha waxey ahaayeen labo masalo oo aad u adag. Ardaygii wuxuu Aaday maktabadii Jamacada wuxuuna ulaabtay Buugtii laga baari lahaa oo dhan, afar maalmood kadib wuxuu xal uhelay Su'aashii Kowaad, isagoo aad ugu Xanaaqsan Macalinkii siiyay Shaqada sidaa u adag.
Asbuucii xigay markuu Muxadaradii yimidna wuxuu layaabay Macalinkii inuusan katalbin Ardayda inay keenaan Shaqo Gurigii Asbuucii hore.
Daktorkii buuna utagay, isagoo kuyiri "Labadii su'aalood tii Kowaad oo quraa Afar maalmood oo dhan iga qaataday, sidaan ayaana usoo Qoray" Daktorkiina wuu yaabay wuxuuna yiri "Aniga Shaqo Guri maba idiin dirin" Labada Su'aalood ee Sabuurada ku Qorayna waxay ahaayeen Tusaale, masaa´il ayna culimadu ilaa hada xal uhelin ama ay kadaleen.
Taasina waxaa inooga cadaanaysa inay qanacadaa qaldani Culimadii oo dhan kaleexisay inay kufikiraan ama isku dayaan siday xal ugu heli lahayeen Labadaa mas´alo iyo kuwa tirada badan ee lamidka ah.
Ardaygaasina haduu soo jeedi lahaa, oo maqli lahaa sharaxa Doktorka iskuma dayeen inuu kashaqeeyo Labada masalo (Badanaa hurdo ka khayr badan soo jeed). Ilaa iyo hadana waraaqihii uu kaga shaqeeyay Ardaygii jiifay Su´aashii Kowaada waxay yaalaan Maktabadaii Jaamacada.
Hadaba waxaa dhab ah inay Nolosheena hareeyaan Arimo fara badan oo qaldan, oo dhib inagu haya, oo aan rumaynay inaynaan sixi karin, toosin karin ama badali karin, inagoon si dhab ah isugu dayin inaan ka fikiro dadaalna kubixino sidaan usixi lahayn, ubadali lahayn!!
Sidaa darteed bay Qofka waajib ku tahay inuu dhibkasta oo kahor yimaada xal u raadiyo, kafikiro, kusoo jeedo wax badan, isagoon ku qancin waxa ay dadku oranayaan iyagoon baaritaan samaynin, fikir dheer la imanin!!
Si aad u nasato, Culayska iska dhig!
Macalin baa Ardaydisii u sharxayay Cashir ku saabsan culayska dhibaatooyinka Nolosha, wuxuuna damcay inuu siiyo Tusaale sax ah, wuxuuna qaaday Koob ay Biyo kujiraan wuxuuna weydiiyay meeqaad kuqiyaasi lahaydeen culayska Koobkan?
Ardaydii ayaa bixiyeen jawaabo kala duduwan 50-Gram, 60-Gram iwm. Isna wuxuu yiri muhiim ma aha culayska dhabta ah ee Koobku, culaysku wuxuu ku xiran yahay Waqtiga aan xajinayo Koobka.
Hadaan kor u hayo Koobka Hal Daqiiqo, wax dhib ahi ma dhacayo, balse hadaan kor uhayo Hal Saac, gacantaydu waxay dareemaysaa xanuun badan.
Hadiise aan isku dayo inaan xajiyo hal maalin waxaad iigu yeeri lahaydeen Gaariga lagu qaado Dadka jiran ama dhaawacmay! Culayska Koobku isma badalin, lakiin markasta oo ay dheeraato mudada aan xajinayo culayskiisu wuu sii badanayaa, sii xumaanayaa.
Hadaba hadaan xanbaarsano/ sidano dhibaatooyinka Nolosha sida (xasadka, xinka, dabeecadaha qalafsan, eedaha, fikirka xun, xusuusta xun iwm), waxaa imaan doona Waqti aynaan hor usocon karin, maxayeelay xumaanta culayskeeda ayaa inagu sii badanaya, ina sii dulaynaya.
Sidaa darteed waxaa Waajib inagu ah inaan culayska Koobka iska dhigno oon nasano, nafteenana cusboonaysiino. Markastana katirtiro eedihii hore, dhaawacyadii hore, nacaybkii hore, qaladaadkii hore, dabeecadihii hore iwm.
Wanaag is badalka iyo is cusboonaysiintu waa mid aad usareeya, una Qiima badan, Qoraxdu maalin kasta waxay lasoo baxdaa iftiin iyo ilays cusub, waxayna qaadaa jid cusub, si ay inoosiiso Nolol cusub.
Biyaha Wabiga ee socdaa waa xareed nadiif ah, oo Qurxan, biyaha balliga ee fadhiyana dhaqso ayay wasakhoobaan, qurmaan, soo uraan, maxayeelay isbadal iyo hor usocod mahelin.
Sidaa darteed waxaa Waajib inagu ah inaan Nolsheena iyo hab Dhaqankeena ka ilaalino inay Qurunto, soo urto, halmeel ah fadhido (fadhiido waa rabteedii).
Dr. Axmad Cabdulahi - Editor of society, health and education policy for Keydmedia
Maqaallo 30 July 2021 17:35
Koriimada sideedaba waa mid asal ahaan looga qiyaas qaato marxalad markaa la joogo oo mid kale looga gudbayo. Hadaba tani waa qormadda Jimcadda ee arimaha Bulshada, Diinta & Suugaanta ee Keydmedia Online.
Maqaallo 20 July 2021 9:59
Dagaalka Sokeeye ee Itoobiya oo galay xaalad cusub
Maqaallo 19 July 2021 2:18
Aniga iyo Muqdisho
Maqaallo 16 July 2021 12:48
Been Abuurkii Qarniga